Mugga iftiinka masaafada 1 m (lx) 160,000LUX (tallaabooyinka 10aad)
Cufnaanta Iftiinka 83,000lux-160,000 lux / 83,000-160,000 lux
Waxtarka iftiinka leh (lm / W) 130 / W
Heerkulka midabka (K) 3500-5000K (4 talaabo oo la isku hagaajin karo)
Nanchang Light Technology Exlotatin Co, Ltd waa nooc ka mid ah isha iftiinka gaarka ah horumarka, wax soo saarka iyo suuqgeynta. Wax soo saarku waxay la xiriiraan qaybaha caafimaadka daaweynta, masraxa, filimka iyo telefishanka, baridda, midabaynta, xayeysiinta, duulista, dambiilaha baaritaanka iyo wax soo saarka warshadaha, iwm.
Shirkaddani waxay leedahay koox shaqaale tayo sare leh leh. Waxaan diiradda saareynaa fikradaha hawlgalka ee muhiimka ah, xirfadle. iyo adeeg. Addtin, mabda'ayagu waa inuu ka dhigo macmiisha qanac, taas oo loo arko inay tahay aasaaska badbaadada. Waxaan u heellan nahay horumarinta shirkadeena iyo xirfadda isha iftiinka. Marka la eego badeecadaha, waxaan u fidineynaa macaamiisheenna tayo sare leh tayo leh dammaanad ka qaadista inaad gaarto mabaadi'dayada macaamiisha u jihaysan oo tayo leh marka hore. Dhanka kale, waxaan u mahadcelineynaa kuweenna macaamiil cusub oo joogto ah oo ku kalsoon alaabadayada. Waxaan sii wanaajin doonaa wax soo saarkayaga jira iyo adeegyada, iyo qabashada isbeddellada ugu dambeeyay ee horumarka tikniyoolajiyadeed ee salka ku haya. Waxaan dhigi doonaa cusub wareega wax soo saarka farsamada ee soo gelitaanka si loo helo wax soo saar wanaagsan iyo adeegyo farsamo adeegsadayaashayada.
Marka la eego qarniga cusub, Nanchang Light Technology waxay la kulmi doontaa fursado badan iyo caqabado badan iyadoo xawaare sare leh oo pssin badan, xasaasiyadda suuqyada oo siyaado badan leh maareynta si loo hubiyo booskeena muhiimka ah ee dhinaca tikniyoolajiyadda indhaha.
Hore: Endoscope Medical Endoscopic LED isha iftiinka iftiinka
Xiga: Daaweynta infrared daaweynta Therapy Qalabka daaweynta maqaarka daaweynta jirka daryeelka nalka kululeynta
iftiin qalliin oo aan hoos lahayn
nalka saqafka qalliinka
kamarad iftiin qalliin
Guud ahaan iftiinka qolka hawlgalka Medical LED Li ...
Nooca saqafka ah hal madax oo aan lahayn hooskii
Qalliinka keentay ilkaha qalliinka ilkaha laydh ilaalin ...
Tayada Sare ee Qalliinka Laydhka Laydhka Laydhka ee Tayada Sare leh ...
Laydhka Shadowless ee Qolka Hawlgalka
Imtixaanka Qalliinka Caafimaadka Light Mobile Shadowless L ...
Laydhka Nalalka Hoggaamiya, Siraa Ilkaha, derbiga nalka baaritaanka, Nalalka Halogen ee Falanqeeyaha Kiimikada, Iftiinka Caafimaadka, Siraalka Imtixaanka Halogen,